I-Anatase yindlela ye-metanium engafikelelekiyo ye-titanium dioxide - ividiyo
Thenga i-anatase yendalo kwivenkile yethu
I-Anatase yimo ye-madini angafikelelekiyo kwi-titanium dioxide. Iiminerali kwiifom zendalo zihlala zidibana njengento emnyama eqinileyo, nangona impahla emsulwa ingenantsingiselo okanye imhlophe. Ezinye iintlobo ezimbini zemvelo ezivelayo ze-TiO2 ziyaziwa, i-brookite kunye ne-rutile.
I-Anatase ihlala ifunyanwa njengamakristali amancinci, abodwa kwaye ephuhliswe ngokuthe ngqo, kwaye njengesixhobo se-thermodynamically esomeleleyo, ikhala kwinkqubo ye-tetragonal. Eli litye linokuchatshazelwa kuwo onke amaqondo obushushu kunye noxinzelelo, kunye ne-polymorph elinganayo. Nangona kunjalo, i-anatase ihlala ilisigaba sokuqala se-titanium dioksiyiti ukwenza iinkqubo ezininzi, ngenxa yamandla omhlaba asezantsi, kunye notshintsho kulwakhiwo olubi olwenzeka kumaqondo obushushu aphezulu. Nangona umgangatho wokulingana ngokufanayo kwizigaba zombini ze-anatase kunye neendawo ezonakeleyo, akukho nxu lumano phakathi kweengile ezihlangeneyo zezimbiwa ezimbini, ngaphandle kwendawo ye-45 ° ne-90 °. Iphiramidi eqhelekileyo ye-anatase, ehambelana nobuso obucacileyo bobuchwephesha, inekona ngaphezulu komda we-82 ° 9'a, ikona ehambelanayo yesaundle ingu-56 ° 52½ '. Ngenxa yale piramidi eqinileyo
Iindlela ezimbini zokukhula zekristale ye-anatase zinokwahlulahlula. Eyona ixhaphakileyo yenzeka njengeepiramidi ezilukhuni kabini ezinobumba obumdaka nge-indigo-eluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kumbala omnyama kunye nesithambisi esirhabileyo. Iikristali zolu hlobo zininzi e-Le Bourg-d'Oisans eDauphiné, apho zidibene khona namatye-ekhristale, feldspar, kunye ne-axhelele kwi-crevices kwi-granite kunye ne-mica-schist. Iikristali ezifanayo, kodwa ezinobukhulu be microscopic, zisasazeka ngokubanzi ematyeni aleleyo, njengamatye esanti, ii-clays, kunye nesaladi, apho zinokuthi zahlukane ngokuhlamba indawo ekhanyayo yelitye elingumgubo. Umdiza we-anatase ngowona ndawo uzinzo Thermodynam ngokwezona meko kwaye lolona candelo lubonakaliswa kakhulu kwindalo nakwindalo yokwenziwa.
Iikristali zoluhlobo lwesibini zinobuso obuninzi bepiramidi obuphuhlisiweyo, kwaye zihlala zicekeceke okanye ngamanye amaxesha zithandeke ngokwendalo, umbala ubusi-bumthubi ngombala omdaka. Iikristali ezinjalo zifana ngokusondeleyo ne-xenotime ngembonakalo kwaye, ewe, ixesha elide zazifanelwe ukuba zezoluhlobo, igama elikhethekileyo i-wiserine lisetyenziswa kubo. Zenzeka zixhonywe kwiindonga zemilambo kwimigca ye-Alps, iBinnenthal kufutshane neBrig e-canton Valais, eSwitzerland, njengendawo eyaziwayo yendawo. Ngokwendalo pseudomorphs of rutile emva anatase ziyaziwa.